ပြေတီဦး မင်္ဂလာပွဲမှာတွေ့ရတဲ့ ဖွေးဖွေးရဲ့ အလှ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Entertainment » ပြေတီဦး မင်္ဂလာပွဲမှာတွေ့ရတဲ့ ဖွေးဖွေးရဲ့ အလှ
ပြေတီဦး မင်္ဂလာပွဲမှာတွေ့ရတဲ့ ဖွေးဖွေးရဲ့ အလှ
Posted by နွယ်ပင် on Jan 21, 2011 in Entertainment | 19 comments
ဒါကို လှတယ်လို့ ခံစားမိတာလား……………. ယဉ်ကျေးမှု အ၀တ်အစားနဲ့မလိုက်သလို ခံစားမိတယ်နော်။
ဘလာစီယာ မ၀တ်ဘူးထင်တယ်နော်.. ကျောပြောင်ကြီးနဲ့.. သူလည်း တမျိုး ထွင်နေတယ်။ နောက်ပိုင်း သတိုးသမီးတွေ တက်တူးထိုးပြီး မင်္ဂလာဆောင် နေကြအုန်းမယ်။ မင်္ဂလာဦး အမှတ်တရ ဆိုပြီးတော့ တက်တူးဆရာတွေ အလုပ်ဖြစ်ဦးမယ် ထင်တယ်။
ဟဲ ဟဲ မ ဆိုး ၀ူး ပဲ … တက် တူး ထိုး စား မှ နဲ. တူ တယ် .. မ ဆိုး ၀ူး နော် .. ဟီး ဟီး ..
ဒီတက်တူးက မြန်မာဝတ်စုံနဲ့တော့ မလိုက်ဘူးဗျ… အရင်လို Gothic စတိုင်နဲ့ဆိုရင်တော့ မဆိုးဘူး… ခုဟာက နည်းနည်းလွဲနေတယ်ထင်တယ်… ကျွန်တော်တို့ လူငယ်မျက်စိနဲ့တောင် သိတ်အဆင်မပြေဘူး…
တစ်မျိုးတော့ တစ်မျိုးပဲ ကြည့်ရတာပြောပါတယ်
တက် တူး ထိုး စား မှ နဲ. တူ တယ် .. မ ဆိုး ၀ူး နော် .
သူလဲဒီလိုအချိန်လေးပဲ ပြရတာ ပြပါစေ နောက်ဆို ရှေ့မှာလဲ ရှိမှာပေါ့ နောက်ဆိုပြမယ် ကုသိုလ်ရတယ်လေ XD
ဘာပြောရမှန်းကိုမသိတော့ဘူး … သူ့ဘာသာတော့ သဘောတွေကျနေမှာအမှန်ပဲ
အဟမ်း ဟမ်း……….ကျောကလေးဘဲဖွင့်ထားလို့.. တော်သေး….။
ဆူးရေ bra က ဂျိုင်းကြားထဲ ညပ်နေတယ်လေ.
ကျောပြောင်တာက ဖွေးဖွေး တစ်ယောက်ထဲ တင်မဟုတ်ပါဘူး အဲ့မှာ ဗန်းကိုင်ရော လက်စွပ်ကိုင်တဲ့ သူရော အရံတွေရော အားလုံးကျောပြောင်တွေချည်းပဲ …အရှေ့ကိုတောင် မြင်မကောင်းမှာဆိုးလို့ ပိတ်အထူ ခံပေးထားလေ ဒီဇိုင်နာပည်စိုးအောင် လက်ချက်ပေါ့ . ဆူးရေ Bra ကတော့ တစ်ခါတည်းပါအောင်ချုပ်ပေးထားတယ်ထင်တာပဲ
မဟုတ်ရင် နောက်က ကျောပြောင်ကြီးမှာ Bra ကြိုးကြီးပေါ်နေတော့ ကြည့်ရတဲ့ သူတွေကြည့်လို့မကောင်းမှာ ဆိုးလို့ထင်ပါတယ် …
ဘရာ က အင်းကျီ (မရေးတတ်လို့) ထဲမှာ တစ်ခါထဲ ထည့်ချုပ်ထားတယ်လို့ .. သမီးများက ပြောတာ ကြားဘူးပါတယ် .. ကိုယ်ကတော့ ခေတ် မမီတော့ဘူး .. အရံတွေအားလုံး ဒီလိုပဲ ၀တ်ထားတာ တီဗီမှာ တွေ့လိုက်ရတယ် .. ကျောပြောင်ကြီးတွေနဲ့ .. တစ်နည်းအားဖြင့်တော့ ကြည့်ရ ရုပ်ဆိုးတယ် .. သူတို့ကိုယ်သူတို့တော့ လှတယ် ထင်နေမှာ ..
နောက်ပြီး အဲဒီ အခမ်းအနားမှာ သူတို့တတွေက လျှောက်လမ်း တစ်ခုလုပ်ပြီး အပေါ်က လျှောက်လာကြတော့ အောက်မှာ အားပေးဖို့ ရောက်နေတဲ့ သက်ကြီးဝါကြီးတွေအတွက် အားနာစရာ
တော်တော်ဆိုးဆိုးပဲ အုပ်ထိန်းသူတွေကလဲ မပြောကြဘူးလား မသင့်တော်ဘူးလို့ ခေတ်မှီတယ် ခေတ်ဆန်တယ်ဆိုတာ ဘောင်ထဲကပဲကောင်းတယ်နော် လုံခြုံပြီးလှပတာတွေ ခေတ်မှီတာတွေ တစ်ပုံကြီးပါ
ယိုသူမရှက် မြင်သူရှက်ဆိုတာ ဒါမျိုးပေ့ါ
သတိုးသမီးတောင် ကျော မပြောင်ဘူး အရံတွေက ပြောင်ထားတယ်။ သူတို့လည်း သူတို့ပေါ့ကွယ်။ မြန်မာတပြည်လုံး ပြတာ ဆိုတော့ တောက လူတွေ မျက်စိ ခေတ်မှီလာကြတော့မှာပေါ့။
ဒီခေတ်မှာ fashion တခုအနေနဲ့လူငယ်တွေကြားထဲမှာပေါ်ပင်ဖြစ်နေပါတယ်။
တက်တူးထက် တပ်ထားတဲ့ ကြယ်သီး အလုံး ၂၀ကို ပိုပြီးစိတ်ဝင်စားချင်တယ်… အဟီး